Olee otu igwe ojii okwu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Olee otú igwe ojii na-ekwu okwu
Sergio Gallego | | Igwe ojii
O doro anya na ị hụla ọtụtụ oge mgbe ị na-eme njem n'ụgbọala na ha ga-adọrọ mmasị gị, usoro igwe ojii na-kpụrụ ha n surroundguzo kwa n’elu ugwu nile. Ndi oku okwu igwe ojii ma ha na-anata aha a dị egwu n'ihi na ihe e kere eke ha bụ n'ihi asụsụ nke mbara ala nke ugwu.
Orographic ígwé ojii na-kere mgbe a oku ikuku na iru mmiri ọ hụrụ ugwu ka ọ na-aga, a manye ya ịrị ezigbo oyi. N'oge ahụ, Alụlụụ mmiri ọ na-ekpuchi ma ndị ahụ dị egwu na-etolite ugwu. Dị ka eziokwu dị oke mkpa, igwe ojii na-ekwu okwu igwe na-agba elu elu Ugwu Everest mgbe niile.
Igwe ojii ndị a dịkwa na mpaghara ndị ọzọ dịka Andes mgbe ha fụrụ ifufe westerly nke sitere na Pacific Ocean. Ebe ọzọ ị ga-ahụ ebe igwe ojii na-ekwu okwu bụ n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ United States. Ebe ndị a na-ahụkarị ụdị igwe ojii a nwere ike ịnwe ruru 2,500 mm ọdịda dị kwa afọ n'ụdị mmiri ma ọ bụ snow.
Igwe ojii ndị a na-ekwu okwu mgbe niile ha araparawo n’elu ugwu ebe a kpụrụ ha. Banyere oke igwe ojii ndị a, enwere ha n'ụdị niile. Obere nke kpuchiri akụkụ ugwu ahụ ruo nnukwu akwa nke na-ekpuchi nzukọ ahụ dum. Igwe ojii na-egbuke egbuke na-enwekarị ọdịdị dị larịị ọ bụ ezie na mgbe ikuku na-efe ha nwere ike ịnwe a gbara gburugburu, karịsịa na akụkụ kachasị elu nke ugwu ahụ.
M anya na ị hụrụ isiokwu a banyere otú e si guzobe okwu igwe ojii na kwa site ugbua gawa, mgbe obula I huru ya, I gha amata otu esi ha kuli ma kee ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Olee otú igwe ojii na-ekwu okwu
Mma mara mma nke Antarctica, n'ihe egwu